Ny tantaran'i Declan Rice Childhood Plus Untold momba ny tantaram-piainana
Home TOROHEVITRA FOTSORATRA TSY MISY MPANJAKA Mpilalao Football English Ny tantaran'i Declan Rice Childhood Plus Untold momba ny tantaram-piainana
Ny LB dia manolotra ny tantara feno momba ny "football genius" izay fantatra amin'ny anarana "Declan". Ny tantaran-tantarantsika Declan Rice momba ny tantaram-pianakaviana sy ny tantaran'ny tantaram-piainana tsy fantatra dia mitondra fitantarana feno momba ireo zava-mitranga mahatalanjona hatramin'ny andron'ny fahazazany hatramin'izao. Ny fanadihadihana dia ny fiainany teo aloha, ny fiainam-pianakaviana, ny tantaram-piainana talohan'ny laza, ny fiantsoana tantara, ny fifandraisana ary ny fiainana manokana.
Eny, fantatry ny rehetra fa mpilalao manana hery lehibe amin'ny hoavy izy. Na izany aza, vitsivitsy ihany no mandinika ny tantaran'i Declan Rice izay tena mahaliana. Ankehitriny tsy misy ado, alefaso.
Ny tantaran'i Declan Rice Childhood Plus untold Biography Facts- Fiainana tany am-piandohana sy fianakaviana
Declan Rice dia teraka tamin'ny andro 14TN 1999 tamin'ny rainy, Sean Rice ary ny renin'i Teresa Rice tamin'ny London, Royaume-Uni. I Declan Rice dia avy any Irlandy ary azo jerena avy amin'ireo ray aman-drenin'i Irlandy Margaret sy Jack izay avy any Douglas, tanàna ambanivohitr'i Cork, Irlandy. Ity ambany ity ny mpilalao baolina kitra sy ilay rainy mahafinaritra, Sean Rice.
Misaotra ny ray aman-drenibeny ary noho ny reniny, Teresa, dia avy any Co Longford any Irlandy, i Declan dia mino fa izy dia taranaka Ireniana faharoa any Grande-Bretagne. Raha ny fehin-kevitra, i Irène Irlandey dia olona iray nefa manana fo Britanika.
Declan Rice dia nihalehibe niaraka tamin'ny mamanay, dadany ary mety tsy nisy rahalahy na anabavy tao Kingston teo Thames. Amin'ny maha-zazalahy kely azy dia tonga ny fahatsapana fahatanterahana rehefa misy baolina kitra eo an-tongony. Amin'ny teny ara-baiboly, ny fanomezam-pahasoavana rehetra kely izay nangatahin'i Declan dia tonga tamin'ny endrika baolina kitra. Ny endriny toy izany ho an'ny fanatanjahantena taty aoriana dia nandoa dividends.
Ny tantaran'i Declan Rice Childhood Plus untold Biography Facts- Ny fiainam-piarahamonina tany am-piandohana
Ny fitiavan'i Declan ho an'ny baolina kitra dia nahita azy niaraka tamin'ny amboadia hafa niditra tao amin'ny lisitry ny academy Chelsea Football taorian'ny fitsapana nahomby. Izy dia iray tamin'ireo ankizilahy vitsivitsy nofidian'ny akademia nandritra ny vanim-potoana fifaninanana, fotoana i Chelsea FC vao navaozina ho an'ny mpanakanto Rosiana, Roman Abramovich.
Ny taona 2006, ny fototra ijoroan'i Declan dia napetraka ho fito taona. Fotoam-pandresena ho an'ny fianakaviana Rice izay nahita ny zanak'izy ireo niditra an-tsehatra ny tanoran'ny klioba iray izay vao nanambady azy manokana Jose Mourinho.
Ny tantaran'i Declan Rice Childhood Plus untold Biography Facts- Road to Fame
Ny fiainana Chelsea FC dia tsy mora amin'ny fotoana. Noho izany, ny ankizy henjana ihany no tafavoaka tamin'ny academy. Tahaka ireo mpilalao akademia hafa, ny tsy fandriampahalemana no olana lehibe indrindra ho an'i Declan Rice izay nahita ny mpifanandrina taminy ho mpifaninana aminy. Niady izy ary nahazo tombontsoa kely izay manampy azy handroso amin'ny laharana ambony. Nitohy nandritry ny laharana taonany i Declan mandra-pahazoany ny fifaninanana mendrika indrindra Chelsea ao anatin'ny ekipa 14.
Declan Rice dia anisan'ireo ankizy vitsivitsy izay nahita ny tenany niady tamin'ny tontolo manodidina an'i Chelsea FC nandritra ny taona 14. Mampalahelo fa tsy nahavita niatrika ny tsindry i poor Declan ary nahatonga vokatra goavana izany. Nafahan'ny akademia Chelsea izy izay nahita azy ho toy ny ambim-bary ho an'ny zavatra takiana.
Tamin'ity taona ity, ny 2014 dia ny taona Declan Rice dia niatrika ny fahaketrahana ho toy ny kintan'ny tanora baolina kitra. Tsy misy isalasalana fa misy mpilalao baolina kitra izay manana Niaina tamin'ny alàlan'ny fampiendrehana ny akademia dia hahafantatra tsara ny fanaintainana lalina ara-pihetseham-po ary manimba ny voka-dratsin'ny psikolojika mety hiteraka azy. Nabil Fekir dia nijaly koa izy.
Na dia teo aza ny fandavana ny akademisin'i Chelsea, ny fanapahan-kevitra dia nijanona ho teny filamatra. Tamin'io taona io ihany, dia nantsoina ny Akademian'ny West Ham United i Declan noho ny fitsapana. In West Ham, nahita i Declan miala amin'ny zava-misy mahakivy.
Ny tantaran'i Declan Rice Childhood Plus untold Biography Facts- Mitsangàna mba ho ankizilahy
Better Life eo amin'ny làlana mankany Pro:
Tamin'ny 16 December 2015, herintaona latsaka taorian'ny nidirany tao amin'ny Wes Ham tanora, dia nanao sonia ny fifanarahana matihanina voalohany tamin'ny klioba i Rice ary nanomboka naneho ny ekipa U23 ekipa. Fotoana nanombohan-dry zareo ny zava-bitany. Ny voalohany dia tonga tamin'ny 10th of November 2017 rehefa nahazo ny PL2 mpilalao tamin'ny volana oktobra, 2017 i Rice.
Tamin'ny March 2018, nomem-boninahitra tamin'ny mpilalao u19 tamin'ny taona i Rice. Nahazo tapakila an-taribeny izy ity.
Ny laharana voalohany nataon'i Declan ho an'ny Hammers dia nahazoana azy ny loka. Araka ny filalaon'ny mpilalao baolina;"Fotoana nireharehana ho ahy sy ny fianakaviako izany. Fitiavana lehibe ho an'ny raiko izay tonga hivoaka sy hijery ary ho tia anao. "
Tamin'ny volana 2018, ny anaran'i Declan Rice dia nantsoina ho mpandresy ho an'ny Hamonan'ny 2017-18 ho an'ny taona nahazoany Marko Arnautović. Na dia very aza izy, dia nahazo loka hafa i Rice noho ilay jiolahy tanora nandritra ny herintaona.
"Tonga eto aho rehefa navoakan'i Chelsea tao amin'ny 14 ary dimy taona taty aoriana dia milalao an'i West Ham ao amin'ny Ligy Premier," hoy i Rice izay navoakan'i Chelsea tamin'ny taona 14.
Ny andro alahady dia andro adala ary iray izay nahatonga ny fianakavian'i Declan Rice ho mirehareha amin'ny zava-bitany. Nampiasa io fotoana io i Rice mba hanaporofoana fa tena tsara i Chelsea. Nanao fanambarana tamin'ny klioba izy ary tena faly tamin'ny fampisehoana nataony.
Tamin'ny 23 December 2018, Rice dia nanao ny endriny 50 ho an'i West Ham. Izy no mpilalao voalohany nanao izany nandritra ny mbola tanora Michael Carrick's firaketana an-tsoratra. Rehefa nahita ny fahalianana avy any Man City i West Ham, dia nanapa-kevitra ny hanolotra azy fifanarahana vaovao hatramin'ny 2024 miaraka amin'ny safidin'ny taona fanampiny. Io fotoana voafaritra io dia nalaina tao amin'ny lahatsary etsy ambany;
Ny tantaran'i Declan Rice Childhood Plus untold Biography Facts- Relationship Life
Declan Rice dia olona iray niaina ny fitiavana nandritra ny fahazazany. Nanapa-kevitra ny hanana fifandraisany amin'ny zatovo hafa izy ka mahatonga izany ho an'ny daholobe na dia amin'ny media sosialy aza.
Tsy toy ny ankamaroan'ny tanora mpilalao baolina, ny fanaovana fifandraisana amin'ny besinimaro dia tsy hevitra tsara raha mieritreritra fa mety hisy fiantraikany eo amin'ny asa fitoriana ataon'izy ireo izany. Tsy izany anefa no zava-misy amin'i Declan Rice izay efa mahafantatra ny rakitra natsangany. Teo ambadiky ny kintan'ny baolina kitra, misy sarona felam-boninahitra iray amin'ny anaran'i Lauren Fryer izay mitovy taona aminy miaraka amin'ny sipany.
Rice dia karazan'alahelo izay afaka mihira am-pitiavana amin'ny sipany, manoratra tononkalo, sary hosodoko ary tena manan-danja indrindra, mamorona lahatsarim-pitiavana feno sarin'i love and Lauren Fryer. Ity ambany ity ny iray amin'ireo lahatsary toy izany.
Ny tantaran'i Declan Rice Childhood Plus untold Biography Facts- Lifestyle
Talohan'ny 28th of December, 2018, i Declan dia nahazo mpanefoeona iray monja amin'ny £ 3,000-isan-kerinandro. Toy ny tamin'ny fotoana nanoratana, dia omeny £ 30,000-isan-kerinandro izay manondro ara-bakiteny ny fiovan'ny fomba fiainany.
Ny tantaran'i Declan Rice Childhood Plus untold Biography Facts- Untold Facts
Nanambara ny nanatevin-daharana ny fiarahamonina West Ham, dia nanjary mpankafy sy mpankafy an'i Pablo Zabaleta izay nilalao tao Man City tamin'izany fotoana izany i Declan.
Raha niresaka momba ny fiderany an'i Arzantina izy dia niteny indray androany ...; "Mpankafy an'i Pablo aho tamin'ny 2014. Avy amin'ny mpankafy iray, lasa mpiara-miasa amiko aho
Ny tantaran'i Declan Rice Childhood Plus untold Biography Facts- Fiainana manokana
Ny fahafantaranao ny fiainan'i Persan Rice manokana dia hanampy anao hahazo sary feno azy.
Dikantsoratra Tsongan-Dahatsoratra Nadika Dikantsoratra Tsongan-Dahatsoratra Nadika Dikantsoratra Tsongan-Dahatsoratra Nadika Dikantsoratra Tsongan-Dahatsoratra Nadika Dikantsoratra Tsongan-Dahatsoratra Nadika Dikantsoratra Ny famoahana ny akademia Chelsea FC izay naorina tao Declan fa ny toe-tsaina sy ny fitsipi-pifehezana izay maneho ny toetrany ankehitriny.
MIEZAHA HAHAY: Misaotra ny famakiana ny tantaram-pianakavian'i Declan Rice momba ny tantaram-pianakaviana sy ny tantaram-piainan'ny tsy fantatra. amin'ny LifeBogger, Miezaka izahay mba hanana ny marina sy ny rariny. Raha mahita zavatra izay tsy mety, dia zarao aminay ny fanehoan-kevitra eto ambany. Hanome voninahitra sy hanaja ny hevitrao foana izahay.
Les Roberts Janoary 12, 2019 Tamin'ny 6: 22 hariva
Dikantsoratra Tsongan-Dahatsoratra Nadika Dikantsoratra Tsongan-Dahatsoratra Nadika Dikantsoratra Tsongan-Dahatsoratra Nad Ny tebiteby, ary ny asa kanto dia eo amin'ny karatra.
(Alefaso ho an'i Angletera). tpt.
Ankoatra izany, very hevitra tamin'ny dadanao aho taona vitsy lasa izay, ary tiako ny mihaona aminy, ilay lehilahy mamy indrindra hitako hatramin'izay niainako.
Raha azonao atao ny mampahafantatra azy fa ny mpanafika avy amin'ny phps andro alefany ny tsara indrindra, dia ho feno fankasitrahana mandrakizay aho.
Tsy zavatra vita amin'ny hazo izany, mankahala an'i Westham aho, satria mpankafy mpankafy mandritra ny androm-piainana mandritra ny androm-piainako, Lol, ihany no maneso.
Veloma finaritra, Les Roberts.
William Vaughan March 29, 2019 Ao amin'ny 12: 13 am
Ny dadan'i Declan, Sean, dia mety mahatsiaro ny milalao ao amin'ny ekipan'ny sekolintsika raha izy 11?
Nahazo ny 'lalao' nilalao tao amin'ny kianjan'ny Roadstown Roadstonian tany Kingston.
Ruben Loftus-Cheek Tantaram-pahaizana momba ny tantaram-pianakaviana mbola tsy fantatra momba ny tantaram-piainana
Tantara momba ny fahazazan-jaza i Ashley Barnes sy Untold Biography Facts
Jonjo Shelvey ny tantaram-pitiavam-pitiavan'olon-tiana mbola tsy fantatra momba ny tantaram-piainana